यस्ता डाक्टरलाई सलाम! जो आफै संक्रमित भएर पनि बिरामीको उपचारमा खटिरहेका छन् – PathivaraOnline
Home > समाचार > यस्ता डाक्टरलाई सलाम! जो आफै संक्रमित भएर पनि बिरामीको उपचारमा खटिरहेका छन्
यस्ता डाक्टरलाई सलाम! जो आफै संक्रमित भएर पनि बिरामीको उपचारमा खटिरहेका छन्
admin May 3, 2021 समाचार, स्वास्थ्य	0
काठमाडौ । यो तस्बिर नेपालगन्ज मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालको हो । कोरोना संक्रमितको उपचारमा लाग्दा लाग्दै उनी आफै संक्रमित भए । कोभिड आइसोलेसन वार्डमा कार्यरत डा। पुरुषोतम बर्मा अहिले आफु पनि उपचार गराइरहेका छन् । तर संक्रमितको उपचारमा पनि सकृय छन् ।
कोरोना संक्रमितसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने उनलाई विगत ६ दिनदेखि ज्वरो, रुघाखोकी र श्वास फेर्ने समस्या भएपछि उनी आफै उपचार गराइरहेका हुन् । कोरोनाको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो रहेको आफ्नो स्वास्थ्य समस्याभन्दा उनी वार्डमा भर्ना भएका संक्रमितको स्वास्थ्यप्रति बढी चिन्तित छन् र त आफू अस्वस्थ हुँदा पनि उपचारमा तल्लिन भइरहेका छन् ।
‘मलाई ६ दिनदेखि त्यति सञ्चो छैन, हिजो शनिबार त झन् धेरै गाह्रो भयो,’ उनले भने ‘कोरोनाको लक्षण पुरै छ, पिसिआरको लागि स्वाब दिइसकेको छु, रिपोर्ट अझै आएको छैन।’
कोरोनाको शंका लागेर बिरामीको उपचार गर्दै आफै आइसोलेट भएर बसिरहेको डा बर्माले सुनाए। बाँके, डुडुवा गाउँपालिका वडा नम्बर २ बेतहनी निवासी ३० बर्षका उनी विगत डेढ वर्षदेखि अस्पतालको मेडिकल अफिसर पदमा कार्यरत छन् ।
उनी यसअघि शिक्षण अस्पताल नेपालगन्जको मेडिकल आइसियु कक्षमा कार्यरत थिए। नयाँ भेरियन्टको रूपमा कोरोना महामारी फैलिएपछि अस्पतालले सोही कक्षलाई आइसोलेसन वार्ड बनायो। कोरोना संक्रमितको उपचार गर्नकै लागि उनी सोही वार्डमा काम गर्न थालेका हुन् । यो समाचार नागरिक दैनिकमा छ ।
हार्दिक बधाई : चीनले गर्यो बाचा पुरा, नेपालले पायो एकैचोटि यति धेरै सहयोग!
राजधानीमा कोरोना कहरः ठाउँ खाली नभएपछि वाग्मती किनारमै जलाउन थालियो कोरोना संक्रमितको शव
लकडाउनमा प्रसूति गृह : सुत्केरी र कुरुवाका यस्तो छ पीडा, कस्ले सुनिदिने?
करेण्टले चुडायो हरिका हातखुट्टा,बालबच्चाको यस्तो बिचल्ली, परिवारमा रुवाबासी – भिडियो हेर्नुस